“ သူမ အချစ်ရေးမှာ စိတ် ချမ်း သာ ရပြီး ထင်နေ တုန်းလေး ကံခေသွား ခဲ့ တာလေး ကို ရင် ဖွင့် လာ တဲ့ ပိုးကြာဖြူခင် ” – Shwe Ba
ပိုးကြာဖြူခင် ကတော့ ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေကနေ အောင်မြင် လာတဲ့ မင်းသမီး တစ်လက် ပဲဖြစ် ပါတယ်။ သူမ ဟာ ဆိုရင် ဇာတ် လမ်းတွဲ ရဲ့ ကျရာ ဇာတ်ရုပ် ကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင် မှုတွေကြောင့် အနုပညာ လောကမှာ နေရာ တစ်နေရာစာ အဖြစ်ရရှိလာတဲ့ သူတစ်ဦးပါပဲနော်။ သူမကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရဲ့ နောက်ခံစကားပြောအဖြစ်လည်း အနု ပညာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ဆော င်ရွက်ေ နတဲ့ သူပြဲ ဖစ်ပါတ ယ်။
ပိုးကြာဖြူခင် ကတော့ ကြော်ငြာလေးတွေ ရိုက်ကူးနေ ရတာတွေ ကို တွေ့ရမှာ ပါပဲနော် ။ သူမ ရဲ့ ငယ်ဘဝ အမှတ် တရပုံရိပ်လေး တွေနဲ့ ဗီဒီယို လေးတွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ လတ်တလောမှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းထွက်နေတာလေး ကို ပိုးကြာဖြူခင်က” ကျမကိုတစ်သက်လုံး စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပြီး ကျမအပေါ်အရမ်းကောင်းတဲ့သူပါလားလို့ ယုံကြည်မိ မယ်ရှိသေး တကယ်တော့ ကျမ အချစ်အတွက်ကံမကောင်းခဲ့ပါဘူး”လို့ဆိုပြီး သူမရဲ့ ခံစားချက်လေးကိုလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ် ပါတ ယ်။.
ပိုးကြာဖြူခင် ရဲ့ အချစ်ရေးမှာ ကံခေသွားတဲ့ဆိုတဲ့ခံစားချက်လေးကို ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအား လုံးသာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ တယ်ေ နာ်။
ပိုးကွာဖွူခငျ ကတော့ ရုပျသံ ဇာတျလမျးတှဲ တှကေနေ အောငျမွငျ လာတဲ့ မငျးသမီး တဈလကျ ပဲဖွဈျ ပါတယျ။ သူမ ဟာ ဆိုရငျ ဇာတျ လမျးတှဲ ရဲ့ ကရြာ ဇာတျရုပျ ကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျ မှုတှကွေောငျ့ အနုပညာ လောကမှာ နရော တဈနရောစာ အဖွဈရရှိလာတဲ့ သူတဈဦးပါပဲနျော။ သူမကတော့ ဇာတျလမျးတှဲတှရေဲ့ နောကျခံစကားပွောအဖွဈလညျး အနု ပညာလုပျငနျးကို လုပျကိုငျဆော ငျရှကျေ နတဲ့ သူပွဲ ဖဈပါတ ယျ။
ပိုးကွာဖွူခငျ ကတော့ ကွျောငွာလေးတှေ ရိုကျကူးနေ ရတာတှေ ကို တှရေ့မှာ ပါပဲနျေျာ ။ သူမ ရဲ့ ငယျဘဝ အမှတျ တရပုံရိပျလေး တှနေဲ့ ဗီဒီယို လေးတှေ ကို လူမှု ကှနျယကျ စာမကျြနှာပျေါမှာ တငျပေးလရှေိ့ပါတယျ။ လတျတလောမှာ အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျပွီး သတငျးထှကျနတောလေး ကို ပိုးကွာဖွူခငျက” ကမြကိုတဈသကျလုံး စိတျခမျြးသာအောငျထားပွီး ကမြအပျေါအရမျးကောငျးတဲ့သူပါလားလို့ ယုံကွညျမိ မယျရှိသေး တကယျတော့ ကမြ အခဈြအတှကျကံမကောငျးခဲ့ပါဘူး”လို့ဆိုပွီး သူမရဲ့ ခံစားခကျြလေးကိုလူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ ရေးသားဖျောပွထားတာပဲဖွဈ ပါတ ယျ။.
ပိုးကွာဖွူခငျ ရဲ့ အခဈြရေးမှာ ကံခသှေားတဲ့ဆိုတဲ့ခံစားခကျြလေးကို ပွနျလညျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျတှအေား လုံးသာယာပြျောရှငျတဲ့နရေ့ကျလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါ တယျေ နျာ။
အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေး နဲ့ အထာ ကျကျ မိမိုက် လွန်းနေ တဲ့ မော်ဒယ် ဝင်းရွှေရည်သင်း